စိတ်ကြွဆေး နှင့် ကာမဆက်ဆံမှုလဲလှယ်(ကိုယ်လုံးတီး ဖမ်းစီးရမိ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » စိတ်ကြွဆေး နှင့် ကာမဆက်ဆံမှုလဲလှယ်(ကိုယ်လုံးတီး ဖမ်းစီးရမိ)
စိတ်ကြွဆေး နှင့် ကာမဆက်ဆံမှုလဲလှယ်(ကိုယ်လုံးတီး ဖမ်းစီးရမိ)
Posted by bigbird on Jan 20, 2011 in News | 34 comments
ထိုင်းနိုင်ငံ နောင်းခိုင်မြို့ တွင် အနီးအနားရှိ ဒေသခံများ၏တိုင်တန်းချက်အရ ဇရပ်တစ်ခုအား
ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ရုတ်တရက် ၀င်ရောက်ရှာဖွေရာတွင် စိတ်ကြွဆေးပြားများနှင့်အတူ ကိုယ်လုံးတီးကာမဆက်ဆံ
နေဆဲရှိသော ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ အား ဖမ်းစီးရမိခဲ့ ကြောင်း ယနေ့ ထုတ်
www.khaosod.co.th သတင်းဌာန တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ အဆိုပါဘုန်းကြီးသည်
အသက် ၅၀ ရှိပြီး စိတ်ကြွဆေးပြားများ လက်ဝယ်ထားရှိကာ ၀ယ်ယူသုံးစွဲရန် ပိုက်ဆံမပေး
လိုသော အမျိုးသမီးများ တစ်ခေါက်လျှင် ဆေးနှစ်လုံး ဖြင့် ကာမဆက်ဆံမှုနှင့် လဲလှယ်ရ
ဘယ်လိုဘုန်းကြီးတွေလည်း မသိဘူး …. အခုတစ်လော ဘုန်းကြီးနဲ့ပက်သက်တဲ့အမှုတွေ တော်တော်များနေတယ် …. ကြာရင်သာသနာတော်လည်း ပျောက်ကွယ်တော့မယ် … ကြည့်လည်းလုပ်ကြဦး …..
ဂျပန်မှာ ဆိုရင် ဘုန်းကြီးကို လူတွေက မရှိမဖြစ်အကြောင်းရှိမှ သာဆက်ဆံတယ်။
ကြာရင် ဒီဘက် ထေရဝါဒတိုင်းပြည်တွေမှာပါ အဲသလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူမပြုမိမိမှုပါပဲ… သံဃာတွေက အချင်းချင်းပြန်ထိမ်းပြီး အရေးယူမှ ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
သာသနာကို သာသနာဘောင်ထဲကလူပဲဖျက်မယ် … ဆိုတဲ့စကားမှန်နေပါပေါ့လား။
သူလုပ်တာနဲ. တခြားသူတွေပါရောပီး နာမယ်ပျက်တော့မရ် ….
ရဟန်းဘ၀က ကြိုးတန်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရတဲ့ဘ၀၊ သာမန်လူဝတ်ကြောင်ဘ၀နဲ.မတူဘူး။
ခလုတ်လေးပဲတိုက်မိရင်တောင် ရိုးရိုးလမ်းလျှောက်တဲ့သူက မတော်ရင် လဲကျရုံပဲရှိမရ်။ ကြိုးတန်းပေါ်မှာ ခလုတ်တိုက်ရင်တော့ အောက်ပြုတ်ကျပီး ကျိုးကန်းတာတွေဖြစ်မှာ။
၆ ကောင်လဲတစ်ညလုံး မိုးလင်းထိ ထိုးတယ်..ဘော်လုံးပွဲဆိုလဲအမြဲလောင်းတယ်…ဒီတော့ သိနေမြင်နေရတဲ့..
သူအတွက် အကုသိုလ် ဖြစ်ရပီပေါ့..အဲဒီလို သက္ကန်းအရေခြုံထားတဲ့..ဘုန်းကြီးမျိုးတွေကိုမှ အရေးမယူကြဘူး..
သိက္ခာတော်တွေ…၀ိနည်းတော်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ….နာယက ဆရာတော်ကြီးတွေဘာလုပ်နေကြ
အော် ဒုက္ခ … ဒုက္ခ အခုတစ်လော ကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေကလဲ စိတ်မသက်သာစရာပါလား သာသနာတော်အတွက်တော့ ရင်လေးစရာပါပဲ …
ကြားရ ကြားရ နားဝမှာ မသက်သာ ပါလားကွယ်…
ဒါဆို ဘုန်းကြီးအရေခြုံပြီင်္း လုပ်စားတာပေါ့ ဘုန်းကြီးဆိုရင် တောင်ရုံတန်ရုံ မစစ်ဆေးဘူးလေ ဘုန်းကြီးအတုကြီး နောက်ဆို ဘုန်းကြီးလို့မရေးသင့်ဘူး ဘုန်းကြီး သိက္ခာကျတယ် သင်္ကန်းခြုံ လို့ရေးရမယ် သောနုတ္တရမုဆိုးလိုပေ့ါ
ကျုပ်မှာတင်..ဒီထက်ရက်စက်တဲ့..ဇတ်လမ်း ၂ခု ရထားခဲ့တယ်..။
ဘုန်းကြီးတွေကိုဖျက်စီးတာ .. လူတွေပဲ..။
နံပါတ်ဝမ်းဘုန်းကြီးလို .. ၀ိနည်းကို .. အာပါတ်ဖြေလောက်ရုံချိုးဖေါက်တယ်(ထင်ရတဲ့) အဆင့်လောက်ကို သေအောင်ဝိုင်းပြောပြီး.. ဗေဒင်တွက်။ ဂဏန်းချ၊ မိန်းမလိုက်၊ ဗုဒ္ဓသာသနာကို အခြေခံကစ အယူမှားတွေဖြစ်အောင် သင်ပေး၊ တခြားမိစ္ဆာအယူတွေသွတ်သွင်းနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကျ..ရွေးပြီးကို..ကိုးကွယ်ချင်ကြတာလေ..။
ရဟန်း ဖြစ်တာနဲ့မလုပ်ရတဲ့ ကိစ္စ လုပ်မိတာနဲ့ ရဟန်း မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ဘုရားက သတ်မှတ်ထားတာ ရှိတာကြားဘူးပါတယ်။
**မိန်းမတွေနဲ့ ကာမ မဆက်ဆံရဘူး။
ထိုကိစ္စ နှစ်ရပ်ကို ကျူးလွန်မိရင် ဒီတသက် ရဟန်း လုံးဝ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ချေဖျက်လို့ ရတဲ့ အာပတ်သင့်တဲ့ အဆင့်မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ရဟန်းတပါးဖြစ်ရင် အဗြဟ္မစရိယာ အကျင့်ကို ကျင့်ရပါတယ် သူများသားသမီးကို စိတ်နဲ့ တောင် မပြစ်မှားရဘူး ပြစ်မှားရင် အာပတ်သင့်ပါတယ်။
မူးရစ်ထုံထိုင်း သေရည်သေရက် မသောက်ရဘူးဆိုတာ လူတွေတောင် လိုက်နာရမယ်လို့ ချမှတ်ထားတာပါ။ ရဟန်းဆိုတာ ဆိုဖွယ်ရာ မရှိပါ။
ရောင်းဝယ်တယ် ဆိုရင်လည်း မလုပ်အပ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
လူအနေနဲ့ သံသရာ ရှည်စွာ သွားနေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သိပ်တော့ ကိစ္စမရှိပေမဲ့ ရဟန်းမည်သည် သံသရာ ဘေးထိတ်လန့်တဲ့ အတွက် လူဝတ်ကြောင် ဘ၀ စွန့်လွတ်ကာ ရဟန်းဝတ်တဲ့ အတွက် ထိုကိစ္စများ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားတဲ့ အတွက် ထိုရဟန်း တရားလုံးဝ မရနိုင်တော့ပါဘူး။
၀ိနည်းအရ ရဟန်း များ ၀တ္တု (ပိုက်ဆံ ငွေကြေး) ကိုင်ဆောင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ထိုအတွက် စီးပွားရေး အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ခွင့် လုံးဝ မပြုခိုင်းပါဘူး။ စီးပွားရေး လုပ်တယ် ဆိုရင်လည်း အာပတ်သင့်စေပါတယ်။ မြတ်စွာ ဘုရားမှ လူတို့ လှူတဲ့ ရဟန်းများ သုံးထိုက်သည်ကို သာ အလှူ ခံပြီး ရောင့်ရဲ တင်းတိမ် ချမ်းသာစွာ အားထုတ်ရန်သာ မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
မူးရစ်ထုံထိုင်း သေရည် သေရက် ဆိုသည်မှာ သတိတရားကင်းလွတ်စေတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ သတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးလည်း မကောင်းမှုကို ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့မှု မရှိ လုပ်စေတတ်သောကြောင့် လူများကိုလည်း မပြုလုပ်ရန် ဘုရားမှ တားမြစ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ကိုယ်ကြိုက်လို့ ကိုယ်သောက်လည်း ဘုရားကတော့ လုံးဝ ဘာမှ ပြောမည် မဟုတ် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ ပါဘဲ။
မကောင်းသည်ကို မကောင်းဘူးဟုသာ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရဟန်းတော်များ ၎င်းတို့ဘ၀မှ ဆုံးရှုံးမှုကြီး ၄-ပါး။
(၁) ပဌမ ပါရာဇိက- အဗြဟ္မစရိယ အမှုကို ပြုခြင်း၊
(၂) ဒုတိယ ပါရာဇိက- လူဇာတ် ပစ္စည်းကို ငါးကျပ်တန်မှစ၍ ခိုးယူမှု၊
(၃) တတိယ ပါရာဇိက- လူဇာတ်ဖြစ်သူကို သတ်ခြင်း၊
(၄) စတုတ္ထ ပါရာဇိက- ဈာန် မဂ် ဖိုလ် မရဘဲရ၏ဟု လိမ်ပြောမှု။
ရဟန်းယောက်ျား ပါရာဇိက ၄-ပါး၊
ရဟန်းမ ပါရာဇိက ၄-ပါး၊
အင်္ဂါဇာတ်ကို စုတ်မှီအောင် ခါးပျော့သောသူ၊
သူတပါး အင်္ဂါဇာတ်ကို စုတ်သောရဟန်း၊
သူတပါးအင်္ဂါဇာတ်ကို ဖင်ထဲဝင်အောင် ဖိထိုင်သော ရဟန်း။
သာသနာဖျက်များ ကြီးစိုးလာနေပါသည်။ အတုဘုန်းကြီးတွေကြောင့် အစစ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေ နာမည်ပျက်ကုန်တာ ရင်နာမိပါသည်။
ပြောတာလဲ ပြော ဆိုတာလည်းဆိုကြပေါ့လေနော့
သဘောအရ သူဖြစ်နေတာကို ကိုယ်က အလိုမတူတိုင်းစွတ်ပြီးပြောနေကြတော့
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘဲ စိတ်အာပတ်သင့်နေပြီဆိုတာ အရင်သတိထားကြကွဲ့ 
သူလုပ်တာ ကိုယ်လုပ်တာမှ မဟုတ်တာ
တာဝန်ရှိသူက သက်ဆိုင်သူကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ကြမှာဘဲ
မူးရစ်ထုံထိုင်းဆေးရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ပညာပေးရမယ်
ကြည့်လေ ဆေးစွဲနေတဲ့အတွက် ဘာကိုမှ မသိနိုင်တော့ဘူး
ဘုန်းကြီးနဲ့ တောင် တူနယ်တေး ရလောက်အောင် အသိမဲ့သွားပြီ
ခုတော့မဟုတ်ဘူး တစ်ခါလာလည်း သာသနာဖျက် နှစ်ခါလာလဲ သာသနာဖျက်
ဖတ်ဘူးတဲ့စာအုပ်တွေ လှန်ပြီး စာအုပ်ထူကြ
သူတို့ ကိုကြည့်ပြီး ဒုက္ခရတာလဲ ဒုက္ခပါဘဲဂလား
ဟုတ်ပါ့ဗျာ G Talk မှာလည်း ဘုန်းကြီးတွေတော်တော် သောင်းကျန်းနေကြတယ်။ လုပ်ကြပါဦး!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
အော်….ဆိုးလိုက်တာနော်…စိတ်ကြွဆေးဆိုတာကိုလည်း တော်တော်လေး သုံးလာကျပါလားနော်….။ထိုင်း မှာကတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာ…ရဲတွေကလည်း မြန်တယ်ဗျာ။ကြိုက်သွားပီ.။
မပြောတတ်တော့ဘူး အော်….. မပြောအပ်တော့ဘူး ………………………………………………………………………………………………
ဒီလူနဲ့တူသောအကျိုးမျိုး ဘ၀ဆက်တိုင်းမှာ မင်းတစ်ယောက်ကင်းလွတ်ဝေးပါစေ ဟာ……ဘာမှလဲဆိုင်ဘူး ကိုထီး သီချင်းနဲ့ က အစလေးဆိုင်သလိုလိုနဲ့
gtalk တင်လား ကျွန်တော်တို့ မသိတဲ့ sexy ဆိုဒ်တွေ သူတို့သိတယ်။
ဟုတ် တယ် ဗျာ .. အင် တာ နက် လာ သုးံ တဲ. ဘုန်း ကြီး တွေ က မ ကောင်း တာ တွေ ပဲ ကြည်. ကြ တာ သာ သ နာ က တော. ကုန် တော. မယ် ဗျာ
ဂေါတမဗုဒ္ဓက … ရဟန်းကာမဆက်ဆံရင်.. ပါရာဇိကကျမယ်ဆိုတာ ..ဘုရားဖြစ်ပြီး သံဃာဂိုဏ်းတော်တော်ကြီးလာမှ.. ပညက်တာပါ..။
ဖြစ်ပုံကလည်း ရဟန်းမိဘတွေက .. သူတို့မျိုးဆက်ပြတ်တော့ပါမယ်ဆိုပြီး .. မိန်းမကို ဘုန်းကြီးကျောင်းညညလွတ်လွတ်ပေး.. ကလေးရအောင်လုပ်ရာက .. အမြင်မတော်..လုမှုရေးရှုတ်ထွေးကုန်တာမို့ .. ပညက်ခဲ့တာပါပဲ.။
ငါ့ပညက်တာကို နားမထောင်ရင်..ဒီအဆင့်အထိလုပ်ရင်တော့ ..ငါထောင်တဲ့ဂိုဏ်း(သံဃာအဖွဲ့အစည်း)ကထွက်ဟေ့..အထိအေ၇းယူတယ်ပေါ့..။
အဲဒါနဲ့ သာသနာမကွယ်ပါဘူး..။ ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကနေ..အခုထိ..နှစ်၂၆၀၀ခရီး.. ဒါမျိုးတွေပုံမှန်ဖြစ်နေခဲ့တာပဲ.။
သာသနာက ..တရားတွေကို ..မှားယွင်းဖွင့်ဆိုကြမှ.. တရားပျောက်မှ… ကွယ်မှာ..။
သာသနာမကွယ်ပေမဲ့ သံဃာသီလစင်ကြယ်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ နို့မို့ရင် ဘာလို့ဘုရားနဲ့ တန်းတူထား ကိုးကွယ်နေမှာလဲ။ ဘုရားက ဝိနည်းပညတ်ချက်တွေကို အကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲနဲ့ ကြိုတင်မထုတ်ပါဘူး။ ပြသနာဖြစ်လာမှ အကြောင်းအကျိုးပြ တားဆီးမိန့် ထုတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းသာသနာမှာ လူရောဘုန်းကြီးပါ ဆုတ်ယုတ်လာတာမို့ သံဃာအပြင် ကိုရင်ကြီး သာသနာနဲ့ ဖိုးသူတော်သာသနာကို မြှင့်တင်ရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဝိနည်းကိုမလိုက်နာနိုင်တဲ့ ကိုယ်တော်တွေ နောက်တတန်းဆင်း၊ ဒကာအောင်ပုလို ဘုန်းကြီးကိုဘီးလှူချင်သူ လူဝတ်ကြောင်များ ရှေ့တတန်းတက်ကြဖို့ပါ။ ကိုရင်ကြီးများက ရှစ်ပါးသီလကစလို့ထိန်း၊ ဖိုးသူတော်များကတော့ ငါးပါးသီလအနည်းဆုံးနဲ့ အချိန်ပိုင်းဆို အိမ်ထောင်သားမွေးလုပ်နိုင်၊ အချိန်ပြည့်ဆို အိမ်ထောင်ကို ကျောင်းနေစဉ် စွန့်ကြရပါမယ်။ လုပ်ရမှာ ဒီလိုအဆင့်ပြန်လည် သတ်မှတ်မှုသည် လိုအပ်သော ဂုဏ်မငယ်သောကိစ္စဆိုပြီး ပညာပေး၊ တကယ်လည်း လေးလေးစားစား ချီးမြောက်နိုင်ရင် သာသနာသည် ကြည်ညိုလေးစားဖွယ် ပိုမိုဖြစ်လာမည်ထင်ပါသည်။
ပွဲခင်းတွေထဲမှာ ကိုရင်ဘုန်းကြီးတွေက လူတောထဲတိုး။
ကိုယ့်ရှေ့မှာတင် လုပ်တာ၊ ကောင်မလေးက ထအော်တော့ ဘုန်းကြီးကိုဆဲတယ်ဆိုပြီး
ဘေးက ဘုန်းကြီးတွေက ကောင်မလေးကို ပြန်အော်တယ် ရိုက်မလိုလက်ရွယ်တယ်။
အဲဒီကောင်မလေးနဲ့ ပါလာတဲ့ အဖွဲ့က ကောင်လေးက ပြန်ပြောတော့ အဲဒီကောင်လေးကို ရိုက်ကြတာ။ ကိုယ်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ ဘေးကလူတွေကပါ အဲဒီကောင်လေးကို ဝိုင်းပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်းမလို့ လုပ်မှ မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး လောက်ပဲ ဝင်ပြောပြီး တားပေးခဲ့ရတယ်။ ကြာပါပြီ ရေကျော်ပွဲမှာတုန်းက။
ကြားရတာလည်း နားခါးလိုက်တာ….. မြင်ရတော့လည်း အမြင်မတင့်တယ်ပေဘူး…. ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်လဲ မသိဘူးနော်…..
ဘုန်းဘုန်းတွေလဲ ဆွဲကုန်ပြီ အေးလေ ယောကျာ်းပဲ ဆွဲမှာပေါ့
ကွန်မန်းတွေ ဖတ်ရတာ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ ဆိုပြီး တွေးမိပါတယ်။ သိပ်တော့ မဖွ ချင်ဘူး။ ပြောရင် ဒေါပွ ကုန်ကြအုန်းမယ်။ တခြားသော ဘာသာဝင်တွေ ပါ ဖတ်နေကြတော့ ကိုယ်ပေါင် ကိုယ်ထောင်းရသလို ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီကောင်မလေးနဲ့ ပါလာတဲ့ အဖွဲ့က ကောင်လေးက ပြန်ပြောတော့ အဲဒီကောင်လေးကို ရိုက်ကြတာ။ ကိုယ်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ ဘေးကလူတွေကပါ အဲဒီကောင်လေးကို ဝိုင်းပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်းမလို့ လုပ်မှ မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး လောက်ပဲ ဝင်ပြောပြီး တားပေးခဲ့ရတယ်။ ကြာပါပြီ ရေကျော်ပွဲမှာတုန်းက။”
ပွဲဈေးမှ တင်မဟုတ်ပါဘူး။ လိုင်းကားတွေပေါ်မှာပါ မကျန်ပါ။ ဘုန်းကြီးအားလုံးကို မဆိုလိုပါ။ သို့သော် ကိုယ်တွေ့။
အဲဒါဆိုရင်ကြုံတုန်းကိုယ်တွေ့တစ်ခုပြောပြရဦးမယ် 2001 ခုနှစ်လောက်ကပေါ့ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းသုံးယောက်၊ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူတူ Happy World ကသရဲအိမ်ထဲဝင်ကြတာပေါ့ အဲဒါကတစ်ယောက်ချင်းတန်းစီပြီးဝင်ရတာလေ ကိုယ်ကနောက်ဆုံးကဖြစ်နေတာပေါ့ ရှေ့ဆုံးကယောကျာ်းလေးသူငယ်ချင်း သရဲအိမ်ဆိုတော့မီးကလဲမှိန်မှိန်လေးပေ့ါ အနောက်ကနေ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ပုခုံးကိုလှမ်းကိုင်လိုက်တော့ အရမ်းလန့်သွားတာပေါ့ အနောက်ကိုလဲလှည့်မကြည့်ရဲဘူး သရဲအိမ်ဆိုတော့ သရဲလား လူလားမသိပေါ့ အတင်းအရှေ့ကိုတိုးသွားပြီးအမြန်အပြင်ရောက်အောင်ထွက်လိုက်တာ ယောကျာ်းလေးသူငယ်ချင်းကို မိန်းကလေးသုံးယောက်အတင်းဆွဲလွဲပြီးထွက်ကြတာ သူငယ်ချင်းဆွဲကြိုးတောင်ပြတ်ထွက်တယ် အပြင်လဲရောက်ရော အနောက်ကိုကြည့်လိုက်တာ ဘုန်းကြီးသုံးပါးဖြစ်နေတယ် သူတို့နောက်မှာလဲဘယ်သူမှထွက်မလိုက်လာဘူး သူတို့မလုပ်ရင်ဘယ်သူလုပ်မလဲ အဲဒါနဲ့ဘယ်ရမလဲ ရန်တွေ့တာပေါ့ အဲဒီကြမှ သိတော့တယ် ရခိုင်ဘုန်းကြီးသုံးပါးဖြစ်နေတာ သူတို့ကပဲ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ပြူးတူးပြဲတဲလုပ်သေးတယ် နောက်ကြတော့ဘုန်းကြီးကလဲဖြစ်နေ၊ သူတို့ကသုံးပါး၊ ယောကျာ်းလေးသူငယ်ချင်းကလဲစိတ်တိုနေတော့ကိုယ်တွေကပဲအလျှော့ပေးလိုက်ရတယ်လေ အဲဒါဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပဲ
တခါတလေကျရင် ကြည်ညိုရတာ တကယ်ဒွိဟဖြစ်တယ်
၀ါဝါမြင်တိုင်းရွှေ မထင်ပါနဲ့။မိမိ ကိုယ်ကွယ်သော သံဃာသည် မည်သို့သောသံဃာတည်း။ ဓမ္မ = တရား (ဘုရား၏အဆုံးအမ များသည် တရားဖြစ်သည်)။ဒီနေရာ သံဃာ့ ဂုဏ်တော်မဖွင်တော့ပါဘူး။ရှင်းရှင်းပဲရေးရရင် သံဃာ ဆိုတာ သံဃ အပေါင်းအစု၊အသင်းအဖွဲ့၊အယူဝါဒ။အကျင့်သိက္ခာ တူသော ပုဂ္ဂုလ်တွေ အစုအပေါင်းအဖွဲ့အစည်း။ သံဃ ဂုဏ်တော်တွေကအရိယာသံဃာတွေရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေ။အရိယာ သံဃာတော်များမှသာလျှင် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏တရား အဆုံးအမတွေကိုကောင်းစွာကျင့်ကြံအားထုတ်ကြပါသည်။ထိုအတူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသည်လည်း ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမ များကိုကောင်းစွာသိရှိလိုက်နာနိုင်မှ သာလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို ရည်ညွန်းပါသည်။
ကိုယ်ကရုပ်ရှင်ရုံသွားရင် ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ သင်္ကန်းဝတ်တွေ တွေ့ပါမယ်၊ကြည်ညိုဖွယ်ရာ သံယာဖူးတွေ့ချင်ရင် ၀ိပသ်သနာ ရိပ်သာတွေနဲ့ ရွှေကျင် ဂိုဏ်းဝင် စာသင်တိုက်တွေ သွားပါ ။၀ိနည်းတော်နဲ့ အညီ ကျင့်သုံးကြတာတွေ့ရရင် ကိုယ့်မှာ ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တရားနဲ့အညီ နေတဲ့သံဃာကလဲ ကစားကွင်းနဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံထဲ မရောက်ပါ။
ဒေါ်ပဒုမ္မာ ပြောတာ သိပ်မှန်တာဘဲ။ တရား အားထုတ်တဲ့ ရဟန်း နဲ့ မအားထုတ်တဲ့ ရဟန်း အများကြီး ကွာတာ သိပ်သိသာတယ်။
ကိုရီးယား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကနေ တစ်ခြားဘာသာဖြစ်တာ ဘုန်းကြီးတု တွေကြောင်. ပါတယ်လို.ကြားဘူးပါတယ် ။ ကိုရီးယားစစ်အတွင်းက Japan တွေက ဘုန်းကြီးယောင် ဆောင်ပြီး ဆွမ်း၇ပ်တဲ. ပုံနဲ. အိမ်ထဲရောက်မှ မတရားကြံကြတာ လို. ကိုရီးယားလူမျိူး သက်ကြီးပိုင်းပြောတာ မှတ်သားရဘူးပါတယ်။
ကိုရီးယားဂျပန်ဝင်တော့ .. မြန်မာပြည်ထက်တောင်ကြမ်းသေးတယ်.။
ဆိုတေ့ာ.. ဘုန်းကြီးယောင်ဆောင်နေမှာမဟုတ်ဖူး..။ နောက်ပြီး မဟာယာနရော။ ဇင် မှာရော.ဆွမ်းခံကြွမယ်မထင်ဘူး..။
အိမ်ပေါ်တက် တအိမ်လုံးတန်းစီပါးရိုက်ပြီးမှ .. ကြိုက်တဲ့မိန်းမ ဆွဲချ မတရားကျင့်မှာပဲ..။
မြန်မာထက်ပိုဆိုးတာက.. အဲဒီကိုရီးယားမတွေထဲက ကြိုက်တာတွေကို ..စစ်ထဲထည့်လိုက်ပြီး .. မြန်မာပြည်ဖက်..အပါအ၀င်..အာရှကိုနယ်ချဲ့ရာမှာ ..ရျေ့တန်းကတိုက်နေတဲ့ ..စစ်သားတွေရဲ့ .. လိုရာသုံးပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ခေါ်သွားလိုက်တာပဲ..
ဆက်စပ်ပြီး ပြောရရင်.. ငဘ ဆိုတဲ့.. မြန်မာပြည်ချွေးတပ်မှတ်တမ်းကိုရေးတဲ့ .. စာအုပ်ရှိတယ်..။
အဲဒီထဲ.. နို့ကလေး ၂စုံ ( ၃စုံလားမသေချာ)ခေါင်းစဉ်ငယ်အောက်မှာ. ဂျပန်မတွေရေချိုးတာကို ချောင်းကြည့်တဲ့ သံဖြူဇရပ်ချွေးတပ်သားတွေအကြောင်းပါတယ်..။ အဲဒီအကြောင်း..
ဟုတ်သယ် ကြားလည်းကျုပ်ဖူးတယ်။ မြန်မာပြည် ဖက်ဆစ်ဂျပန်အုပ်ချုပ်စဉ် နှိပ်စက်မှုဒဏ်ကိုခံရတာ ကိုရီးယား တရုတ်တို့ထက်စာရင် သက်သာတယ်။ ဘာပြုလို့လည်းဆိုတော့ ရဲဘော်သုံးကျိတ်က သူတို့နဲ့မဟာမိတ်လုပ်ပြီး ပြည်သိမ်းတပ်ထဲပါခဲ့၊ နောက်ပိုင်းလည်း စစ်ဖက်နယ်ဖက် အနေနဲ့ ပူးတွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့တာကိုး။ တနိုင်ငံလုံးစစ်မြေပြင်ဖြစ်ခဲ့လို့ ပျက်ဆီးခဲ့တာတော့ တပိုင်းပေါ့လေ။ ဒီတော့ ကိုရီးယားမတွေကို ဝင်ဆွဲဖို့ သင်္ကန်းရှာစရာမလိုနိုင်ဘူး။ စစ်ပွဲဖြစ်စ၊ မဖြစ်ခင်ထောက်လှမ်းတုန်းတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြောဖို့ကတော့ မလွယ်ဘူးထင်တယ်။
ုကိုရီးယားတွေ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကုန်တာ ကိုယ်ခံဘာသာတရားအားနည်းတာရယ်၊ ကိုရီးယားစစ်ပွဲမှာ အမေရိကန်တွေ သန်းနဲ့ချည်ပြီး ဝင်နေရာယူခဲ့လို့ပါ။ စစ်ပွဲကျန် မိဘမဲ့ခလေးတွေ၊ ဒုက္ခသည်တွေကို ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၊ ခရစ်ယာန်လူမှုအဖွဲ့တွေက ငွေ၊လူ၊စိတ်ဓါတ်အင်အား ကောင်းကောင်းနဲ့ ဝိုင်းထောက်ပံ့တယ်လေ။ အမေရိကားမှာ ကိုရီးယားသန်းနဲ့ချည်ပြီးရှိတယ်။ အများဆုံး အာရှတိုက်သား စာရင်းထဲမှာပါတယ်။ အားလုံးလိုလိုက ခရစ်ယာန်တွေချည်ပဲ။ လူကြီးပိုင်းက ဘာသာပြောင်းသူခဲ့များတယ်။ ၁၉၈၀ပြည့်လွန်နှစ်ပိုင်း အာဏာရှင် ချန်ဒူးဝမ်လက်ထက်မှာ ဖိနှိပ်မှုကလည်းများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကလည်း မဦးဆောင်တဲ့အပြင် ဂိုဏ်ကွဲအချင်းချင်း ရိုက်ကြနှက်ကြတာ တီဗွီသတင်းထဲမှာ အဲဒီအချိန်က ခဏခဏကြည့်ရတယ်။ ချန်ဒူးဝှမ် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တော်လှန်တော့ အမာခံခြေကုပ်စခန်းက မြို့လယ်က ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလို့ မှတ်ဖူးတယ်။ အမေရိကန်က ဩဇာလွှမ်းတော့ ချန်ဒူးဝှမ်လဲ ချာ့ခ်ျကို ထိရဲခဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကိုရီယားလည်း ဒီမိုကရေစီရ၊ တရုပ်အင်အားကြီးလာတာကို ကျားကန်ဖို့ တောင်ကိုရီယားကို အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ကွက်တွေချပေး။ ဒါနဲ့ပဲ ကိုရီးယားလည်း ကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်။ အဲမူလဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ တောဖက်မှာပဲ ကျန်တော့တယ်ဆိုတယ်။ သိသလောက်ပြောပြတာပါ။ မှားရင်ထောက်ပြ ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။